कोरोना परीक्षण किन घट्यो ? - Nayabulanda.com
कोरोना परीक्षण किन घट्यो ?
नयाँ बुलन्द २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:४५ 65 पटक हेरिएको
काठमाडौं । केही दिनयता कोरोना परीक्षण दर घटेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो एक साताको तथ्याकं विश्लेषण गर्दा दैनिक सरदर १४ हजार ४ सय ५८ जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ ।
गत आइतबारदेखि हिजो शनिबारसम्म कुल १ लाख १ हजार २ सय ८ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ । यसरी हेर्दा दैनिक १४ हजार ४ सय ५८ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको देखिन्छ ।
यसअघि, २२ हजार जनासम्मको कोरोना परीक्षण हुने गरेको थियो । देशभरका ९० बढी अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिँदै आए पनि परीक्षण दर केही दिनयता न्यून देखिएको छ ।
नमुना संकलन नै कम भएकाले परीक्षणमा कमी आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जनस्वास्थ्य विज्ञले समुदायस्तरमा निकै न्यून मात्रामा परीक्षण हुने गरेको बताएका छन् । परीक्षण दर कम हुँदा संक्रमित संख्यासमेत घटेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार केही प्रयोगशाला तथा अस्पतालले परीक्षण ‘रिपोर्टिङ’ नदिँदा पनि संख्या कम देखिएको हो । ‘अस्पताल जानेको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ,’ डा।पौडेलले भने, ‘रिपोर्टिङ कम भएर पनि संख्या घटेको हुन सक्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, गौर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताललगायतले हिजो शनिबार कोरोना परीक्षण रिपोर्टिङ नै गरेनन् ।
डा. पौडेलले अस्पतालमा आउनेको संख्यामा पनि कमी भएका जानकारी दिए । पीसीआर परीक्षण घटे पनि एन्टिजेन दायरा बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आइतबारदेखि हिजो शनिबारसम्म पीसीआर विधिबाट १ लाख १ हजार २ सय ८ र एन्टिजेन विधिबाट २५ हजार १ सय ८५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जसमा ३९ हजार ५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
फाल्गुनन्दको डाँडागाँउमा फैलियो कोरोना,१० वर्षको बालक सहित ३१ जनामा संक्रमण
पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई थप उपचार गर्न आज दिल्ली लगिँदै
माङ्जाबुङका गजेन्द्र शेर्माले स्थानीयलाई व्यक्तिगत दुई लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
देशभर थप ३,७४९ जनामा कोरोना संक्रमण, ५९ संक्रमितको मृत्यु
फाल्गुनन्द गाउँपालिकालाई दुई संस्थाद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध
संक्रमितको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष
इलाममा एकैदिन १७६ जना कोरोना संक्रमण मुक्त
कक्षा ११ का विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयबाटै
जागरण फाउण्डेशन ,नेपालद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
पाँचथरमा संक्रमणको ग्राफ उकालो चढ्दै,एक दिनमै थपिए १०३ नयाँ संक्रमित
भिडियो एक्सरे सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही समस्यामा
पछिल्लाे २४ घण्टामा ५ हजार संक्रमित थपिए, ७ हजार जना निको भए
उवासंघ पाँचथरद्वारा अस्पताललाई ५५ लाख बढीको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ६ हजार ८५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि